खेताला अभावमा खेत बाँझै- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २१, २०७६ सुजता लामा
सिन्धुलीमाढी — कमलामाई नगरपालिका ४ देउरालीकी सीतामाया सापकोटाको झन्डै ८ बिघा जमिन बाँझो छ । यतिबेला लहलह धान हुनुपर्ने खेतमा वनमारा झाँगिएको छ । जमिनदार भनेर चिनिएको उनीको परिवार त्यो परिचय अहिले फेरिएको छ ।
अरूजस्तै साधारण किसान भएका छन् । जसोतसो २ बिघा खेतमा मात्र बाली लगाएको उनले बताइन् । उबेला जमिनदार भनेर कहलिएका उनका श्रीमान् योगेन्द्र सापकोटा अहिले प्यारालाइसिस भई थला परेका छन् । ४ जना छोरा छुट्टिएर बसेका छन् । उनीहरू आआफ्नै पेसा व्यस्त छन् । नछुट्टिएको अन्तरे छोरा भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । छोरीहरू सबैको विवाह भइसकेको छ । सीतामायालाई अहिले खेती गर्ने मान्छेको अभाव छ ।
पहिले–पहिले अधियाँ गर्नेहरू पनि अहिले त खेती गर्न छाडेर बिदेसिएका छन् । ‘पहिले त मलाई अधियाँ गर्न दिनुस् न । म राम्रोसँग खेती गर्छु । समयमै अधियाँ बुझाउँछु जिम्दार्नी आमा भन्नेहरूको घरमा ताँती नै लाग्थ्यो ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त त्यसैगरी खा भन्दा पनि कोही खेती गर्न मान्दैनन् । दुःख गर्नुभन्दा हामी त विदेश नै जाने हो जिम्दार्नी आमा भन्छन् ।’ अझ थप्दै उनी भन्छिन्, ‘अहिले त यति खेती गर्न पनि कम्ती गाह्रो भाछ र ? घरैबिच्छे जस्तो छोरा मान्छे विदेश गएका छन् । अनि त खेताला नै भेटिँदैन । खेताला खोज्न दस गाउँ डुल्नुपर्छ ।’
सीतामायाको छुट्टिएर बसेका काइला छोरा सुरेन्द्र सापकोटाले भने झन्डै एक बिघा जति खेती गरेका छन् । सबै दाजुभाइले खेती छाडेकाले बाउबाजेको बिँडो थाम्न आफूले खेती गरेको उनी बताउँछन् । ‘त्यही पनि कम्ती गाह्रो भएको छ र ? खेती गर्छु त भन्यो, खेताला नै पाइँदैन,’ उनले भने ।
धेरैजसो युवाहरू साथीभाइको लहलहैमा लागेर, अरूको देखासिखी गरेर त कोही खेतीपाती गर्न लजाई बिदेसिने गरेकाले खेत बाँझै बस्ने समस्या आइपरेको उनी बताउँछन् । ‘आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कामलाई ठूलो सानो सम्झने र अरूको ठाउँमा जे पनि गर्न तयार हुन्छन् मान्छेहरू के गर्नु ?’ उनले भने, ‘अब सरकारले छिट्टै नै युवाहरूलाई बिदेसिनबाट रोक्ने गतिलो नीति ल्याउनुपर्छ । नत्र यहाँ भने खेत बाँझै रहिरन्छ, युवाहरू भने विदेश पलायन भइरहन्छन् ।’
कमलामाई नगरपालिका ४ कै शम्भु बस्नेतको पनि झन्डै २ बिघा जमिन बाँझो छ । दुई बूढाबूढी मात्रै रहेका उनीहरूले पनि पहिले भए जति जमिन सबैमा खेती गरेका थिए । कति आफूले खेताला लगाएर त कति अधियाँ दिएर । तर अहिले भने बस्नेत परिवारले न आफूले नै खेती गर्न सकेका छन्, न त अरूले नै खेती गर्न मानेका छन् । जमिन बाँझै बसेकोमा भने बस्नेत निकै नै चिन्तित छन् । भन्छन्, ‘खेती गर्न छाडेपछि त बारीभरि वनमारा उम्रिएको छ । यसले बारी नै रुखो बनाउने भयो । के गर्नु अरूलाई त्यसै गरी खा न त भन्दा पनि कोही मान्नेवाला छैनन् । आफ्नो यति राम्रो बारीमा सबै वनमारा मात्र पलाएको छ ।’
जिल्लाका धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् । बढदो बेरोजगारीका कारण युवाहरू कामको खोजीमा बिदेसिन थालेपछि जमिन बाँझै बस्न थालेका हुन् । जिल्लामा कुल ६२ हजार ७१३ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीले जनाएको छ ।
जसमा ४८ हजार ७८९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीका बागवानी विकास अधिकृत श्रीकृष्ण अधिकारीले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा १३ हजार ९२४ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:१५
टेकाको भरमा संग्रहालय
संग्रहालयभित्र प्रदर्शनमा राखिएका पुरातात्त्विक सामग्रीहरु दत्तात्रयस्थित धातुकला संग्रहालयमा थन्क्याइएको छ । संग्रहालय अवलोकनका लागि टिकट काटेर आउने आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकले सीमित पुरातात्त्विक सामग्रीको मात्र अवलोकन गर्न पाउँछन्
श्रावण २१, २०७६ लीला श्रेष्ठ
भक्तपुर — राष्ट्रियकला संग्रहालय भवनको दक्षिणतर्फको छाना त्रिपालले छोपेको छ । भूकम्पपछि अस्थायी सुरक्षाका लागि राखेको त्रिपाल मक्किएर फाटेपछि पुनः अर्को त्रिपालले छाना ढाकेको हो । सोही त्रिपालबाट समेत पानी छिरेर छानामा प्वाल परेको छ ।
विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा अवस्थित भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त टेकोमा अड्याइएको सिंहध्वाका दरबार । तस्बिर : लीला/कान्तिपुर
पटकपटकको भूकम्पको धक्का तथा पराकम्पहरूले क्षतिग्रस्त भवन थप धराप र जीर्ण बन्दै गएको संग्रहालय अधिकृत प्रतिमा रञ्जित बताउँछिन् ।
टेकोको भरमा अड्याएको धराप भवनमा राष्ट्रियकला संग्रहालयको कार्यालय सञ्चालनमा छ । संग्रहालयभित्र प्रदर्शनमा राखिएका पुरातात्त्विक सामग्रीहरू दत्तात्रयस्थित धातुकला संग्रहालयको चिकंफले मठको भण्डारमा थन्क्याइएको छ । संग्रहालय अवलोकनका लागि टिकट काटेर आउने आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकले सीमित पुरातात्त्विक सामग्रीहरूको मात्र अवलोकन गर्न पाउँछन् । भूकम्प गएको ५० महिना बितिसक्दासमेत विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायरको ‘न्ह्याकं झ्या दरबार’ अर्थात् सिंहध्वाका दरबार (राष्ट्रियकला संग्रहालय) पुनर्निर्माण अन्योलमा छ ।
सिंहध्वाका दरबार पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्त्व विभागले (लाल बैठकबाहेक) को भवन निर्माणका गर्न आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मै ठेक्का लगाइसकेको थियो तर भक्तपुर नगरपालिकाले लाल बैठकसहितको भवन निर्माण मल्लकालीन शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै ठेक्का रद्द गर्न विभागलाई अनुरोध गर्‍यो ।
विभागले सिंहध्वाका दरबार पुनर्निर्माणका लागि ५ करोड ६५ लाख ६७ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ लागतमा सानु सुवाल/एसपी/जेभीलाई जिम्मा लगाएको थियो । ०७५/७६ भदौ मसान्तभित्र निर्माण सक्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्न लाग्दा नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया नै खारेज गर्न विभागलाई आग्रह गरेपछि पुनर्निर्माण रोकिएको भवन थप जीर्ण बनेको राष्ट्रियकला संग्रहालय भक्तपुर प्रमुखसरस्वती सिंहले बताइन् ।
नगर उपप्रमुख रजनी जोशीका अनुसार सिंहध्वाका दरबार नेपाल सम्वत् ८१८ मा राजा भूपतीन्द्र मल्लले निर्माण गरेको हो । विभिन्न कालखण्डमा पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार गरिएका सिंहध्वाका दरबार, मालती चोक प्रवेशद्वार दरबारको रूपमा हाल राष्ट्रिय कला संग्रहालय अवस्थित छ ।
सिंहध्वाको प्रवेशद्वारमा जोडा सिंहबाट पश्चिमतर्फ मल्लकालीन शैली र सिंहदेखि पूर्व अर्थात स्वर्णद्वारतर्फ चुनले पोतेको राणाकालीन (निओ क्लासिक) शैली दरबार गरी दुई खण्डमा विभाजित छ । सिंहध्वाका दरबारको मूलद्वारमा देवताको मूर्तिमा अभिलेखसहित ढुंगाको एक जोडी सिंह, ढुंगाको हनुमान र नरसिंहको मूर्ति अवस्थित छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पले सिंहध्वाका दरबार (लाल बैठक) मा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गरिने
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भक्तपुर दरबारक्षेत्रस्थित ऐतिहासिक सिंहध्वाका दरबार मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रको सिंहध्वाका दरबार (हाल राष्ट्रिय कला संग्रहालय रहेको लाल बैठकसहितको भवन पुराना प्रमाणहरूका आधारमा मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय तयारी भएको नगर उपप्रमुख एवं आर्किटेक इन्जिनियर रजनी जोशीले बताइन् ।
गतवर्ष साउनमा बसेको बैठकले मल्लकालीन शैलीमा सिंहध्वाका पुनर्निर्माण गर्न युनेस्कोको प्रधान कार्यालय पेरिसमा अनुमतिका लागि पुरातत्त्व विभागमार्फत अनुरोध पठाउने निर्णय भएको नगरप्रमुख प्रजापतीले बताए । बैठकले २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मालती चोकको पश्चिमतर्फको भवन पुरातत्त्व विभागद्वारा पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का भएको भाग निर्माण गर्ने र बाँकी अगाडिपट्टिको भाग युनेस्कोको स्वीकृतिप्राप्त भएपछि नगरपालिकामार्फर्त पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले सिंहध्वाकाका ऐतिहासिक प्रमाण तथा चित्रहरू संकलन गरी सम्पदाकै रूपमा संरक्षण गर्न विस्तृत नक्सा डिजाइनसहित विज्ञहरूबीच छलफल गरेको जनाएको छ । छलफल र अध्ययनको निचोडअनुसार दरबारको सम्पूर्ण भाग मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न मन्त्रालय र विभाग सहमत भएको समेत नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतीले बताए ।
‘भक्तपुर’ मासिकमा रवीन्द्र मुनकर्मीले उल्लेख गरेअनुसार सन् १८५६ मा न्हयकं झ्याः दरबारको आधा भाग भक्तपुरको वडा हाकिम धीरशमशेर राणाद्वारा भारतमा सृजना भएको अंग्रेज शैलीको लाल बैठकलाई पहिलो र भुइँ तलामा ६ वटा खम्बा भएको बार्दली राखेको भवन निर्माण गरियो ।
सिंहध्वाकाको पश्चिमतिर अवस्थित संरचना १९९० को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हुँदा स्वरूप नै परिवर्तन गरेर छानामुनि दोस्रो तलाको बीचमा तीनमुखे झ्यालको दायाँबायाँ सानो झ्याल, पहिलो तलाको बीचमा आकर्षक शैलीको झ्याल राखी दायाँतिर सानो, ठूलो आँखी झ्याल र बायाँतिर पनि सानो झ्याल राखियो । भुइँतलामा सिंहध्वाकाबाट दायाँतिर सानो आँखी झ्याल, ढोका राखेको छ ।
राजा भूपतीन्द्र मल्ललाई भारतबाट ऐना उपहार आएको र त्यो कसैसँग नभएको ऐनाबाट प्रभावित भएर राजाले सबैलाई देखाउनुपर्छ भनी ऐना राखिएको झ्यालसहित दरबार निर्माण गर्न लगाएको मुनकर्मीले लेखमा उल्लेख गरेको छ । ऐना राखिएको झ्यालसहितको दरबारलाई नै ‘न्हयकं झ्याः’ दरबार भनिएको उल्लेख छ । नगरपालिकाले सिंहध्वाका दरबार पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक कार्य तयारी गरिसकेको नगर उपप्रमुख जोशीले बताइन् । सिंहध्वाका पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्यभइरहेको समेत उनले बताइन् ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:१४
सिनो हाइड्रोसित मेलम्चीको अर्को ठेक्का
प्रयोग गरिँदैन आकाशे पुल
जाडो छल्न झरे क‍र्‍याङकुरुङ